Suuqgeynta Cloud: Sida Loo Sameeyo Automation-ka Automation Studio si loogu soo dejiyo Xiriiriyaha SMS MobileConnect | Martech Zone
Shirkaddeennu waxay dhawaan u fulisay Salesforce Suuqgeynta Cloud macmiil haysta ilaa dersin is dhexgalka kuwaas oo lahaa isbedelo adag iyo xeerarka isgaarsiinta. Xididku wuxuu ahaa a Ka adeegso dukaameeyaha saldhig leh Dib u Dalacsiinta Is-diiwaangelinta, xal caan ah oo dabacsan oo loogu talagalay bixinta ganacsiga e-commerce-ku-saleysan.
Shirkadu waxay leedahay hirgalinta fariimaha mobilada ee hal-abuurka leh halkaas oo macaamiishu ay ku hagaajin karaan rukunadooda fariinta qoraalka ah (SMS) waxayna u baahdeen inay u guuraan xidhiidhkooda moobaylka MobileConnect. Dukumeentiga soo dejinta xiriirada moobaylka ee MobileConnect waa:
Ku samee qeexida soo dejinta gudaha La xidhiidh dhisaha.
Samee otomaatig gudaha ah Istuudiye Automation.
Kudar dhaqdhaqaaqa soo dejinta si otomaatig ah
Markaad habayso hawsha soo dejinta, dooro qeexida soo dejinta adigaa abuuray.
Jadwalka iyo dhaqaajiso otomatiga.
Taasi waxay u egtahay nidaam 5-talaabo ah oo fudud, sax? Xaqiiqadu waxa ay tahay in uu aad uga sii adag yahay sidaa awgeed waxa aanu go’aansanay in aanu diiwaan galino oo aanu halkan ku wadaagno.
Talaabooyinka Faahfaahsan Ee Lagu Soo Keeno Istuudiga Automation-ka
Talaabada ugu horeysa waxay ku abuuraysaa qeexida soo dejinta Contact Builder. Halkan waxaa ah kala goynta tillaabooyinka tan lagu samaynayo.
Ku samee qeexida soo dejinta gudaha La xidhiidh dhisaha adiga oo riixaya Abuur badhanka gudaha Contact Builder> Soo dejinta.
Dooro List sidaada Meesha la beegsanayo nooca improt aad rabto inaad sameyso.
Dooro Isha soo dejinta. Waxaan dooranay inaan ka soo dejino ku meel gaar Kordhinta Xogta taas oo lagu sii shubay xogta.
Clock on Dooro Liiska iyo Dooro Liiskaaga (Xaaladdayada, Dhammaan Xiriirada - Mobile).
Xiriiradaan dhamaantood waa ay soo galeen waxaanan u haajirayna MobileConnect, marka waa in aad ogolaato Siyaasadda Shahaadaynta ka-baxsan.
Khariidad liiska tiirarkaaga soo dejinta (waxaan abuurnay kuwa Kordhinta Xogta oo leh xiriirka ContactKey ee horey loo aasaasay).
Magaca hawshaada oo dooro kaaga Koodhka SMS iyo Keyword SMS.
Xaqiiji saaxiraha oo guji Finish si loo badbaadiyo hawshaada cusub. Hubi inaad ku darto cinwaankaaga iimaylka ogeysiisyada si laguugu ogeysiiyo mar kasta oo soo dejinta la fuliyo natiijooyinka.
Qeexitaannadaada soo dejinta hadda waa la keydiyay oo waxaad ku tixraaci kartaa Automation-kaaga oo aad ku abuuri doonto Istuudiye Automation.
Tillaabooyinka lagu abuurayo otomaatiga gudaha Istuudiye Automation aad uma cadda. Ha isticmaalin Dhaqdhaqaaqa Soo Dejinta faylka. Soo hel Hawsha SMS halkaas oo aad ku dari karto dhaqdhaqaaqa adiga oo isticmaalaya Soo rar hawsha Xiriirka SMS.
Kudar dhaqdhaqaaqa soo dejinta Automation-ka adiga oo dooranaya qeexida soo dejinta ee aad ku abuurtay tallaabada 8 ee sare. Waxaad u baahan doontaa inaad balaadhiso Gal SMS meesha aad ku arki doonto qeexida soo dejinta.
Jadwalka iyo dhaqaajiso otomatiga. Marka otomaatigaagu uu shaqeeyo, xiriirada mobilada ayaa la soo dejin doonaa waxaana lagugu ogeysiin doonaa ciwaanka iimaylka ee talaabada 8.
Haddii aad u baahan tahay gargaar, ha ka waaban inaad nagala soo xidhiidho Highbridge. Waxa aanu samaynay hirgalin balaadhan iyo guurti laga soo guuray goobaha kale ee suuqgeynta mobaylada una guurnay Mobile Cloud.
Tags: istuudiyaha otomaatiga ahxiriir dhisefuraha xiriirkasamee qeexid soo dejineedkordhinta xogtakhariidaynta goobtaqeexida soo dejintaliiska soo dejintasoo dejinta liiska mobiladasoo dejiso macaamiisha mobiladasoo dejinta sms hawlaha xidhiidhkadaruuraha suuq geyntaxiriirada mobiladaistuudiyaha mobiladamobile ku xidhidhka door-bida siyaasadda shahaadocusboonaysiindib u dallaci is-diiwaangelintaiibinsfmcKa adeegso dukaameeyahaSMSSMS codesms keywordmeesha la beegsanayo
Manash wuxuu leeyahay waayo-aragnimo 30 sano ka badan xagga horumarinta, cabbiridda, iyo isku-dhafka software-ka xalal adeeg ahaan. Sida aasaasaha iyo lammaane at Highbridge, Manash ayaa mas'uul ka ah qiimeynta iyo horumarinta macaamiishooda iyo kartida horumarinta gudaha, mudnaanta iyo hirgelinta xalalka otomaatiga ah, iyo horumarinta isku-dhafka adag, isdhexgalka.
Waa maxay sababta Nadiifinta Xogta ay Muhiim u tahay iyo Sida aad u Fulin karto Hababka iyo Xalka Nadaafadda Xogta